Ihe nkwụnye ụda
Adaeze C01 USB-C Audio
C02 USB C Jack nkwụnye
Otu Port USB-C Hub
site ha na 20-12-29
Ihe ngosi USB4 toro ma wukwasi n'elu USB 3.2 di na USB 2.0. Ihe owuwu USB4 na-akọwa usoro iji kesaa otu njikọ ọsọ ọsọ na ọtụtụ ụdị ngwaọrụ dị iche iche nke kachasị mma nke kachasị nyefe ụbọchị site na tyye na ngwa. Dị ka USB Type-C ...
HDMI Ngosipụta Port
Ezubere HDMI iji dochie ihu igwe analog na-egosi ọdịyo na ntanetị nnyefe vidiyo dịka SCART ma ọ bụ RCA. Ọ na-akwado ụdị vidiyo dị iche iche TV na kọmputa, gụnyere SDTV, vidiyo HDTV, gbakwunye ọtụtụ ọnụọgụ dijitalụ. Ma HDMI na UDI na-enweghị ọrụ nnyefe ọdịyo ketara nke ...
HDMI ọ dị mma karịa VFA, ọ bụrụ na ọ bụ, gịnị kpatara ya?
VGA na-eru nso 35 afọ ugbu a ma ọ bụ usoro analog. Maka kọmputa nke oge a, nke a pụtara na ị ga-atụgharị site na akara ngosi dijitalụ, na analog RGB & mmekọrịta, wee laghachi dijitalụ maka ngosipụta na nyocha LED / LCD gị - a ga-enwe ụfọdụ mbibi nke ihe oyiyi na ọkwa ọ bụla, gụnyere ...
Kedu ihe bụ USB 3.2 standard?
Universal Serial Bus, ma ọ bụ USB, adịla adị ogologo oge ma anyị ejirila ya jikọọ ọtụtụ ngwaọrụ site na nchekwa na ngwaike ntinye. Ka oge na-aga, ọ dị mkpa ka emelite ụkpụrụ iji kwadobe ngwaike nke oge a na ihe ndị chọrọ njedebe. Nkọwa na iche iche oru d ...
ihe bụ USB3.1 Hub?
site ha na 20-06-29
Oghere USB-C & USB 3.1 Chọpụta ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ụlọ USB-C na eriri 3.1 ebe a. Kedu ihe dị iche? Enwere ọdịiche ọ bụla? USB Type-C bụ njikọ njikọta nke ewepụtara na 2015. -dị njikọ-ụdị, nke a na-ahụkarị ogologo oge, ga-anọchi ...
gịnị bụ USB 3.0 Hub?
USB 3.0 hub Thekpụrụ USB 3.0 nke egosiri na 2008 kwere nkwa na ọnụọgụ data na-abawanye ụba ma e jiri ya tụnyere USB 2.0 nke teknụzụ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na USB 3.0 dakọtara na teknụzụ ndị gara aga, a ka nwere ike iji ngwaọrụ ndị ochie jiri eriri USB 3.0 ọhụrụ. Nchikota ...
HDMI Technology Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri ngwaọrụ asatọ ejiri HDMI teknụzụ ebubatala ka ewepụtara nkọwapụta HDMI izizi na Disemba 2002. Nkọwapụta HDMI 2.1 kachasị ọhụrụ ewepụtara na November 2017 na-aga n'ihu iji mee ka mmepe nke ụdị ngwaahịa ọhụrụ na solutio ọhụrụ ...
gịnị bụ HDMI 2.1 Nkọwapụta;
HDMI 2.1 Nkọwapụta HDMI® Nkọwapụta 2.1 bụ mmelite kachasị ọhụrụ nke nkọwapụta HDMI ma kwado ọtụtụ mkpebi vidiyo dị elu na ọnụego ume ume gụnyere 8K60 na 4K120, yana mkpebi ruo 10K. A na-akwado usoro HDR di omimi, na ike bandwidth na-abawanye ...
Kedu otu njikọ USB Type-C si arụ ọrụ na HDMI Alt Mode?
Ọnọdụ HDMI Alt maka njikọ USB Type-CTM na-enye ohere ka HDMI nyeere ngwaọrụ ndị nwere ike iji eriri USB-C njikọ iji jikọọ na ngosipụta nke HDMI, ma nyefee HDMI akara na njirimara n'elu eriri dị mfe na-enweghị mkpa maka protocol na njikọ nkwụnye ma ọ bụ dongles. Nke a na-enyere t ...
gịnị bụ USB 3.2?
Nkọwa USB 3.2 Dịka teknụzụ ọhụụ na-aga n'ihu, ụdị ngwaọrụ dị iche iche, usoro mgbasa ozi na nnukwu nchekwa dị ọnụ ala na-agbanye. Ha choro otutu bandwidth iji jigide ndi oru mmekorita ndi mmadu biara. Na mgbakwunye, ngwa ndị ọrụ chọrọ hi ...
Njirimara nke USB chaja (nzipu ike USB)
USB sitere na interface data nwere ike inye onye isi ike na ihe omuma data. Taa ọtụtụ ngwaọrụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta ike ha site na ọdụ ụgbọ USB ndị dị na laptọọpụ, ụgbọ ala, ụgbọ elu ma ọ bụ ọbụna mgbidi mgbidi. USB abụrụla ebe dị ike maka ọtụtụ s ...
1. USB Type-C® Cable na Connector Nkọwapụta mkpa ka ị mara
USB Type-C® Cable and Connector Specification Na-aga n'ihu na ịga nke ọma nke USB interface, enwere mkpa iji dozie teknụzụ USB iji jeere usoro nhazi na ngwa ọhụụ ka ha na-aga n'ihu maka ihe ndị pere mpe, dị gịrịgịrị ma gbaa ọkụ. Ọtụtụ n'ime nyiwe na ngwaọrụ ndị ọhụrụ a bụ r ...
Mepee: 8: 00 n'ụtụtụ - mechie: 22:00 mgbede
Bụrụ ọkachamara n'ihi na raara onwe ya nye, na-ahọrọ anyị, na-ahọrọ ahụmịhe ọrụ dị iche iche. companylọ ọrụ anyị bụ ihe ngwọta agbakwunyere nke R&D, imewe, mmepụta na ọrụ ahịa.
HDMI ọ dị mma karịa VFA, Ọ bụrụ otu a, Kedu ...
Debanye na nke anyị Akwụkwọ akụkọ USN Life & nweta 10% anya ndepụta ego